Xog ku saabsan shahaadaha COVID-19 - helsenorge.no
Xog ku saabsan shahaadaha COVID-19
Shahaadada COVID-19 ayaa ku siinaysa dulmarka guud ee talaallada COVID-19 kuwaasoo aad iskaga diiwaan gelisay Diiwaanka Talaalka ee Norway SYSVAK, baaritaannada COVID-19 iyo caabuqyo kasta oo hore oo COVID-19 ah.
Sidee ayaad ku helaysaa shahaadadaada COVID-19?
Maxaad ku aragtaa shahaadaada COVID-19?
Shahaadooyinka COVID-19 waxaa laga isticmaalaa Norway iyo EU iyo EEA
Xeerarka siinaaya shaahadada COVID-19 ee midabka cagaaran ama cas
Shahaadada koroonaha ee dadka aan isticmaalin aaladaha digitaalka ah
Taariikhdaada dhalashada ee ku qoran shahaadada COVID-19 ito midda baasaboorkaagu ma kala duwan yihiin?
Kama heli kartid miyaa faahfaahinta talaalka ama baaritaanka shahaadada COVID-19?
Diiwaan gelinta danbe ee talaallada korona fayras ee lagu baxshay banaanka Norway
Xeerka Sirta ee shahaadada COVID-19 ee Norway
Bogaan ayaa la cusboonaysiiyay. Markii u danbaysay ee la cusboonaysiiyay: 16.07.2021
Haddii aad haysato lambarka aqoonsiga qaranka ama lambarka D, waxaad geli kartaa shahaadadaada COVID-19 adoo galaaya helsenorge.no. Waxaad adeegsan kartaa BankID, BankID moobilka, aqoonsiga Buypass ee smart card, aqoonsiga Buypass ka moobilka ama Commfides e-ID. Ka fiiri xog dheeraad ah oo ku saabsan sida loo galo barta helsenorge.no.
Arag shahaadadaada COVID-19 (oo ku qoran afka Norway iyo Ingiriis)
Shahaadadaada COVID-19 waxaa ku jira xog ku saabsan
talaalkaagii ugu danbeeyay ee COVID-19
soo kabashooyinkaagii COVID-19 intii lagu jiray lixdii bilood ee lasoo dhaafay*
natiijooyinka baaritaanka dhawaan lagaaga waayayn COVID-19
Tani waa xog shaqsi ah, taasoo aad tusi karto dadka kale haddaad rabto. Kadibna waxaad awoodi doontaa inaad adeegsato bogaga maamulka oo leh koodhadhka QR.
Saxnaanshaha shahaadada COVID-19 ayaa si ootomaatig ah loo cusboonaysiin doonaa markasta ood la baxdo. Xogta waxaa lagasoo qaataa Machadka Qaran ee Caafimaadka Dadwaynaha mana kaydiso Helsenorge.
Waxaad ku shuban kartaa shahaadadaada oonleenka ah ee COVID-19 moobilkaaga ama taableedka. Qasab maaha inaad daabacdo shahaadada haddii aad haysato koobigaan oonleenka ah. Haddii aad wali doonayso inaad daabacato, fadlan daabaco.
*Waxyaalala qofku ku caddayn karo in cudurku hore ugu dhacay waa tijaabo PCR ah oo la aqoonsan yahay, tijaabada antigenka ah ama lagu eegayo in cudurku qofka hore ugu dhacay (maaha tijaabada degdegga ah). Haddii covid-19 kugu dhacay ama aad ka shakisan tahay inuu kugu dhacay, laakiin aanad haysan caddayn la oggol yahay, waxa aad iska qaadi kartaa tijaabada lagu eegayo in cudurku kugu dhacay (waa antistoffserologi, ee maaha antistoff hurtigtest) oo aad iskaga qaadi kartid laab shaybaadh oo natiijada gelinaysa nidaamka shaybaadhyada ee MSIS. Suuragal maaha in MSIS laga diiwaangeliyo jawaabta tijaabo cudurka koroonaha laga helay oo la iskaga qaaday waddan kale. Tijaabooyinka lagu eegayo in cudurka hore loo qaaday waa in la iska qaado ugu dambeyn maalinta ka horreysa maalinta tallaalka si shahaadada koroonahu u noqoto mid shaqaynaysa, kaddib marka la isu geeyo cudurka qofka ku dhacay iyo irbadda koowaad ee tallaalka. Macno ma leh wakhtiga ka soo wareegay marka la is leeyahay cudurka ayaa kugu dhacay, waxa loo baahan yahay keliya in ugu yaraan 3 toddobaad ka soo wareegtay. Waxyaalaha la aqoonsan yahay ee qofku ku caddayn karo in covid-19 ku dhacay waxa laga helayaa hoosta Jawaabta tijaabada.
Shahaadada COVID-19 waxaa ku jira bogaga maamulka oo leh koodhadhka QR. Waxaa lagaa dalban karaa inaad shahaadadaan lasoo baxdo markaad ka gudbayso xaduudaha EU/EEA, aad soo galayso Norway, aad ku isticmaalayso Norway ama aad ku jirto xaaladaha kale ee xogtaan looga baahan yahay.
Tusmooyinka muuqda ee sida loo adeegsado shahaadada korona:
Markaad ka gudbayso xaduudaha wadamada kale ee ku yaala Yurub iyo markaad soo galayso Norway
Si aad u gasho munaasabadaha kale ee Norway
Shahaadada COVID-19 waxay ka kooban tahay labo bogaga maamulka ah:
Bogga maamulka ee Norway ayaa muujinaaya in shahaadadu ay ku haboon tahay munaasabadaha ayadoo lagu salaynaayo xeerarka qaranka. Xog badan ka ogoow natiijooyinka ku qoran qaybta cagaaran ama qaybta cas ee shahaadada COVID-19 ee Norway.
Bogga maamulka ee EU/EEA ayaa loo adeegsan karaa in looga gudbo xaduudaha. Waa xeerarka wadanka aad joogto waxa go’aaminaaya in shahaadadu sax tahay. Waxaad ka helaysaa dulmar guud barta Dib U furida EU.
Shahaadooyinka COVID-19 oo loo adeegsado munaasabadaha waawayn
Natiijada baaritaanka lagaa waayay fayraska oo ka yar 24 saac ama xaalad sheegaysa inaad difaac qabto ayaa ku siinaysa shahaadada COVID-19 oo cagaaran. Waxaad difaac qabtaa markaad talaal buuxa qabto, 3-14 asbuuc laga joogo markii aad heshay kuurada koobaad ee talaalka ama aad ka bogsootay caabuqa COVID-19 intii lagu jiray lixdii bilood ee lasoo dhaafay.
Waxaa suuragal ah inaad u adeegsato shahaadada COVID-19 munaasabadaha waawayn, sida masraxyada, tiyaatarada, kulannada ciyaaraha iyo xafladaha, iyo sidoo kale doomaha xeebaha maxaliga ah.
Haddii aad u baahato inaad baaritaan marto si aad u hesho shahaadada COVID-19, waxaa lagu siin doonaa xog qeexan oo kasoo baxaysa maamulaha ama bixiyaha baaritaanka ee munaasabada ama doonta aad ku qaadanayso baaritaanka. Baaritaanku wa ainuu noqdaa mid boobsiis ah waana lacag la’aan. Waa inaad xaqiijisaa inaad talaalka qaadato xiliga ku haboon.
Xog badan ka ogoow waxa aad u baahan tahay inaad samayso kahor munaasabada si aad u awoodo inaad keento shaahadaada cagaaran ee COVID-19.
Shahaadooyinka COVID-19 ee loo adeegsanaayo wadamada EU/EEA
Laga bilaabo Luuliyo 1deeda shahaadada oonleenka ah ee COVID ee wadamada EU ayaa dhaqan geli doonta. Inta badan wadamada EU/EEA ayaa lagu xiri doonaa marinta EUDCC waxayna awoodi doonaan inay xaqiijiyaan cadaymaha COVID-19 ee Norway marka dadku marayaan xaduudahooda.
Haddii aad go’aansato inaad banaanka u safarto waxaad masuul ka tahay inaad barato shuruudaha karantiilka, baaritaanka iyo xakamaynta caabuqa ee ka jira wadanka aad booqanayso. Shuruudahaan ayaa kala duwan wadamada kaladuwan.
Dulmarka cabirada qabanaaya wadamada kaladuwan ee EU/EEA ayaa laga heli karaa qaybta Dib u furida EU.
Ka fiiri sidoo kale: Norway ayaa noqotay qayb kamid ah nidaamka EU ee shahaadoodinta COVID-19 (government.no)
Shahaadooyinka COVID-19 oo lagu adeegsado xaduuda Norway
Haddii aad qabto talaalka buuxa ama aad kasoo bogsootay COVID-19 lixdii biloow ee ugu danbeeyay, aadna xogtaan ku qori karto shahaadadaan COVID-19 oo ku xiran nidaamka EUDCC, waxaad awoodi doontaa inaad si xor kusoo gasho Norway, ayadoon laga eegayn wadanka aad katimid.
Waxaa sidoo kale lagaa reebi doonaa masuuliyada gelista karantiilka, baaritaanka gelitaanka kahor, baaritaanka xaduuda iyo shardiga diiwaan gelinta gelitaanka.
Ka fiiri Diiwanaka Soo galootiga ee Norway (UDI) si aad u hesho xeerarka soo gelitaanka Norway ee muwaadiniinta oo dhan.
Shahaadada COVID-19 waxay muujinaysaa in dhawaan lagaa waayay caabuqa iyo inkale, inaad qaadatay talaalka ama aad leedahay difaac aad ka heshay qaadista COVID-19. Xeerarka kaladuwan ayaa loo dajiyay shahaadada COVID-19, kuwaasoo go’aaminaaya in lagu siinaayo shahaadada bogga cagaaran ama cas ee shahaadada COVID-19 ee Norway.
Shahaadooyinka cagaarka iyo casaanka ayaa keliya ka shaqaynaaya gudaha Norway, ayadoo xogta lagu baxsho bogga dheeraadka ah ee maamulka la hubin doono markaad soo galayso Norway iyo marka aad u safrayso wadamada kale ee Yurub.
Kuwaani waa xeerarka go’aaminaaya in shahaadada COVID-19 lagu bixinaayo astaan cagaaran ama astaan cad gudaha Norway:
Waxaad heli doontaa bogga cagaaran ee xakamaynta haddii mid kamid ah sadexda qaybood (talaalka, difaaca jirka ama natiijada baaritaanka sheegaysa inaadan caabuqa qabin) uu buuxsho shuruudaha ku qoran xeerarka. Haddii aad hesho bogga cagaaran ee xakamaynta ood ku hesho wax kabadan midkood, kan ugu mudada dheer ayaa lagu siinayaa. Waxaa jira faraqiyo u dhexeeya natiijooyinka ku jira shahaado sax ah (bogga xakamaynta ee cagaaran) iyo mudada shahaadada saxda ah (mudada ay shaqaynayso).
Shahaadada COVID-19 waxaa lasoo degsan karaa lana adeegsan karaa adoon haysan interneed, ama qaybta waraaqda ah ayaa la daabacan karaa kadibna la adeegsan karaa. Marka shahaadada loo adeegsado qaabkaan, waxay lahaan doontaa muddo ku kooban 90 maalmood laga bilaabo markii lasoo degsaday ama la daabacay. Xataa haddii xaaladaada difaaca buuxa socoto wax ka badan 90 maalmood, waa inaad ama soo degsataa ama daabacagaa markale 90 maalmood kadib si aad u hesho shahaado cusub oo shaqaynaysa.
Haddii aad shahaadada ku adeegsato ab aadna ku xariiriso interneedka, mudada dhicitaanka oo 90 maalmood oo hadda kadib ah ayaa lagu tusayaa.
Tani kama dhigna in qofka leh xaalada “difaacan” ama “talaallan” keliya difaac helaayo 90 maalmood.
Shahaadada COVID-19 ayaa keliya shaqaynaysa 90 maalmood oo mustaqbalka ah si looga hortago in si khaldan loo isticmaalo, iyo in la hubiyo in shahaadadu ka kooban tahay waxa aan ka ognahay fayraska, difaaca, iyo talaallada xili kasta.
Haddii aanad isticmaali karin telefoonnada casriga ah, kombuutar ama waxyaalaha la midka ah, waxa aad dalban kartaa shahaadada koroonaha oo laguugu soo dirayo boosta. Waxa kale oo aad wici kartaa telefoonka macluumaadka koroonaha si aad u hesho shahaadada koroonaha oo warqad ah oo kuugu imanaysa boosta. Ogow in qofka u baahan shahaadada oo keliya soo wici karo lambarkaas si loo caawiyo.
Maadaama dadku badan yahay, waxa lagu talinayaa in qofka kasta oo awoodi karaa isticmaalo nidaamka digitaalka ah, si dadka aan fursad kale lahayn loo caawiyo. Marka la isticmaalayo nidaamka digitaalka ah waxa la soo daabacan karaa shahaadada oo warqad ah.
Shahaadada lagu dalbanayo warqad boosta la soo dhigayo
Si aad dalabka shahaadada koroonaha u soo dhigi kartid boosta waa in aad leedahay lambarka dhalashada ee noorwiijiga ah ama d-nummer. Dadka arrintani khuseyso waxa ka mid ah:
Dadka leh qof ka masuul ah. Masuulka ayaa u dalban kara qofkaas, waxase shardi ah in masuulnimadu tahay mid ka diiwaangashan diiwaanka Helfo.
Dadka deggan Norway, laakiin aan lahayn cinwaan uga diiwaangashan diiwaanka dadweynaha.
Dadka deggan waddan kale, laakiin aan lahayn cinwaan uga diiwaangashan diiwaanka dadweynaha
Dadka aan iskood soo wici karin Helfo ee aan codsan karin shahaadada.
Maxaa loo baahan yahay in warqaddu ka koobnaato?
Waa in warqaddu caddayso in aad rabto in shahaadada koroonaha laguu soo diro, waana in ay ka koobnaato:
Magaca, lambarka dhalashada ama d-nummer, cinwaanka aad joogto, iyo cinwaanka aad rabto in shahaadada lagu soo diro
Koobiga aqoonsi shaqaynaya (baasaboor, liisaan gaadiid oo noorwiiji ah ama kaadh aqoonsi ah)
Waxa aad isticmaali kartaa foomkan si aad ugu qorto macluumaadka loo baahan yahay:
Dalabka shahaadada koroonaha ee dadka aan isticmaalin aaladaha digitaalka ah (PDF, noorwiiji bokmål)
Halkee ku soo diraysaa warqadda?
Warqadda iyo koobiga aqoonsiga u dir:
Haddii aad haysato shahaado koroona oo shaqaynaysa, waxa laguugu soo dirayaa boosta. Suuraggal maaha in shahaadada koroonaha lagu soo diro boosta digitaalka ah. Helfo ma soo diri karto shahaadada koroonaha haddii waxa ka dhiman yihiin codsiga.
Caadi ahaan shahaadada koroonaha waxa laguu soo dirayaa 1-2 toddobaad kaddib.
Shahaadada lagu dalbanayo telefoon
Diyaarso labarkaaga aqoonsiga qaranka ama lambarka D
Wac laynka caawimaada ee xogta korona (shaqaalaha ayaa ku jawaabi kara af Noorway, Ingiriis, Carabi, Soomaali, Polish ama Urdu):
Saacadaha shaqadu waa 08.00 - 15.30, Isniinta ilaa Jimcada.
Markaad Norway kasoo wacayso: 815 55 015
Markaad dibada kasoo wacayso: +47 21 89 80 42
Shaqaalaha kiiska ayaa kaa codsan doona inaad sheegto aqoonsigaaga qaranka ama lambarka D, magacaaga iyo ciwaanka kuu diiwaan gashan. Nasiib daro, haddii magaca iyo ciwaanka aad sheegto aysan waafaqsanayn ciwaanka kuu diiwaan gashan, ma heli doontid shahaadada COVID-19. Waa inaad intaas kadib la xariirtaa diiwaanka bulshada si aad u hubiso xogta lagaa diiwaan gashay.
Haddii aad haysato shahaadada COVID-19 oo sax ah, waxaa laguugusoo diri doonaa boostada.
Fadlan ogoow inay qaadan karto asbuuc inaad hesho shahaadada. Sidaas awgeed laguuma soo diri doono shahaadada COVID-19 ee ku salaysan in lagaa waayay korona fayras waayo natiijada ayaa keliya shaqaynaysa 24 saac.
Ogoow in shahaadadu keliya shaqayn doonto 90 maalmood marka la daabaco kadib.
Ma deggan tahay waddan kale?
Haddii aad deggan tahay waddan kale oo aad leedahay lambar dhalasho oo noorwiiji ah ama d-nummer, laakiin aanad haysan bankID ama nidaam kale oo xaqiijin ah oo aad ku geli karto helsenorge.no, waxa aad isticmaali kartaa xalkan loogu talogalay dadka aan isticmaalin aaladaha digitaalka ah ee kor lagu soo sharraxay. Waxa shardi ah in cinwaankaaga waddanka kale uu ka diiwaangashan yahay diiwaanka dadweynaha.
Helsenorge.no ma geli kartid miyaa?
Haddii aanad geli karin helsenorge.no, dad kale ayaad awood u siin kartaa (PDF) in ay kuu soo daabacaan shahaadada koroonaha. Ugu yaraan 30 maalmo ayaa la sugayaa jawaabta codsiga awood-siinta. Ogow in awoodda noocaas ah ee aad qof siiso ay qofka kale fursad u siinayso inuu arko xogtaada caafimaadka ee ku jirta adeegyada caafimaad ee ka mid ah helsenorge.no.
Shahaadada COVID-19 waxay taariikhda dhalashada kasoo qaadataa Diiwaanka Qaran ee Bulshada. Dadka qaar ayaa la siiyay lambarka D kaasoo aan sheegayn taariikhdooda saxda ah ee dhalashada.
Haddii aad isticmaalayso baasaboor shisheeye oo leh taariikhda dhalashada oo tan ka duwan, waxaad la xariiri kartaa Maamulka Canshuurta ee Norway xaqiijinta sharaxaada leh ee khaladkaan.
Waxaad sidoo kale arki kartaa sida loo codsado in la badalo taariikhdaada dhalashada adoo galaaya Diiwaanka Qaran ee Dadka.
Ma heli kartid miyaa talaalka?
Shahaadada COVID-19 ayaa xogta talaalka kasoo qaadata Diiwaanka Talaalka ee Norway, SYSVAK. Keliya talaalkii ugu danbeeyay ayaa lgau qoraa shahaadada; talaallada hore waxaa lagu qoraa bogga talaalka. Haddii aadan arki karin talaalkaagii ugu danbeeyay ee COVID-19, waxay u badan tahay inaan la diiwaan gelin.
Waxay qaadan kartaa waqti inta u dhaxaysa marka lagu talaalo iyo marka talaalka laga diiwaan gashay SYSVAK. Haddii aadan u jeedin talaalka, waxaad la xariiri kartaa xarunta lagaa talaalay, si ay u diiwaan gashaan.
Ma heli kartid miyaa baaritaanka COVID-19?
Shahaadada COVID-19 ayaa kasoo qaadata xogta ku saabsan natiijooyinka baaritaanka kaydka xogta ee Shaybaarka MSIS. Xogta kooban ayaa muujinaysa baaritaankii ugu danbeeyay ee laguu qoray intii lagu jiray todobadii maalmood ee lasoo dhaafay. Waxaad keliya arki doontaa baaritaankii ugu danbeeya haddii aan lagaa helin COVID-19.
Haddii dhawaan lagaa helay cudurka COVID-19, baaritaankaagii ugu danbeeyay ayaa la qarin karaa. Kadibna waa inaad sugtaa dhawr maalmood kahor intaadan keenin natiijada baaritaanka COVID-19 oo aanan sheegayn inaad qabto cudurka COVID-19.
Bogga natiijada baaritaanka, waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan baaritaannada COVID-19 ee aad martay. Haddii baaritaankaagu uusan ku jirin bogaan, waxaa suuragal ah inaan la qorin. Waxaad la xariiri kartaa xarunta baaritaanka aadna waydiin kartaa inay natiijada baaritaankaaga qoreen iyo inkale.
Ma qaaday caabuqa COVID-19 laakiin ma waysan tahay xogta baaritaanka?
Shahaadada COVID-19 ayaa kasoo qaadata xogta ku saabsan natiijooyinka baaritaanka kaydka xogta ee Shaybaarka MSIS. Waxaad heli doontaa difaac caadi ah haddii aad qaaday cudurka COVID-19 intii lagu jiray lixdii bilood ee lasoo dhaafay. Tan waxaa lagu muujin doonaa shahaadada muddo lix bilood ah laga bilaabo taariikhda baaritaanka koobaad ee sheegay COVID-19.
Dadka qaarkood, nasiib daro ma awoodno inaan muujino inay difaac ka heleen caabuqa. Tan ayaa noqon karta tusaale inaan awoodi waynay inaan si ootomaatig ah u fasirno natiijooyinkaagii hore ee COVID-19.
Diiwaannada kasoo kabashada COVID-19 ee dibada ka yimaada laguma qori karo MSIS.
Gelitanka xogta talaallada COVID-19 ee lagu baxshay dibada oo la gasho Diiwaanka Talaalka ee Norway SYSVAK ayaa suuragal ah marka la xaqiijiyo cadaynta qoran ee talaallada. Machadka Caafimaadka Dadwaynaha ee Norway ayaa ku talinaaya in keliya talaallada leh cadaynta Wakaalada Caafimaadka ee Yutub (EMA) laga diiwaan gelin karo SYSVAK. Shardigaan ayaa qabanaaya ayadoon laga eegayn meesha aduunyada kamid ah ee talaalka laga baxshay.
Talaallada ay aqbasho EMA ayaa ah talaallada noocyada Pfizer, Moderna, Astrazeneca iyo Johnson & Johnson.
Si loo diiwaan gasho talaalkaaga, waa inaad sidoo kale haysataa aqoonsiga qaran ee Norway ama lambarka D.
Yaad la xariiri kartaa si loo diiwaan gasho talaalkaaga?
Xogta ayaa la diiwaan gelin karaa kahor intaadan u safrin Norway. Si loo diiwaan gasho talaalka aad dibada ku qaadatay, waa inaad codsataa inaad talo ka qaadato
dhakhtar guud (digtoor)
adeegga caafimaadka ee magaalada
adeegga caafimaadka gaarka loo leeyahay
Tani waxaa lagu samayn karaa qaab oonleen ah/muuqaal ah ayadoo dhakhtarka la tusaayo dukumiintiyada talaalka uuna samayn karo qiimayn xaqiijin ah oo ku aadan inay tahay in la aqbalo ama la diido in diiwaan lagu qoro.
Waa maxya dukumiintiyada aad u baahan tahay?
Shahaadada COVID-19 ee lagusoo saaray EU / EEA, ama
dukumiintiyada qoraalka ah ee talaalka
Waa inaad bixisaa qarashka talo bixinta diiwaan gelinta talaalka. Haddii aad talada ka qaadanayso dhakhtarkaaga guud, waa inaad dhiibtaa qarashka buuxa waayo ma dabooli doonaan miisaaniyada gunnooyinku.
Shahaadada COVID-19 waxay bixinaysaa xog ku saabsan talaalladaada COVID-19, baaritaannada COVID-19 iyo caabuq kasta oo COVID-19 ah ood horay u qabtay. Tani waa xog shaqsi ah, taasoo aad tusi karto dadka kale haddaad rabto. Xog badan ka ogoow ujeedada iyo adeegsiyada xeerka sirta xogta ee Machadka Caafimaadka Dadwaynaha ee Norway ee Shahaadada COVID-19 ee Norway.
Xog dheeraad ah oo ku saabsan adeeggaan
Waxa ku qoran waxaa soo diyaariyay Norsk helsenett, Folkehelseinstituttet
Markii ugu dambaysay ee la cusbonisiiyay Jimco, Bisha Todobaad 16, 2021